मन्त्रीज्यूको खोक्रो मधेसीवाद | Madhesi - United We Stand
मन्त्रीज्यूको खोक्रो मधेसीवाद
November 10, 2006 at 9:28 am Leaveacomment
– राजेन्द्र सिंह ँक्षणिक’
कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बहस’ हेर्दै थिएँ, त्यहाँ मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी माओवादी जोशका साथ प्रस्तुत भए भने माओवादी नेता मातृका यादव संयमित रूपमा ।
मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो वेशभूषाले मात्र मधेसी नेताका रूपमा स्थापित गर्न नसकेको तथ्य राम्ररी थाहा रहेछ । अन्यथा ‘मधेसी’ शब्दको ‘कपिराइट’ नै आफूसँग भएझैं उनी कुर्लनुको अर्थ बुझ्न सकिन ।
आफ्नो वर्ग, समुदायको हितका लागि लड्ने नेताले सुरुदेखि त्यहीअनुसार रवैया अप्ानाउनुपर्ने होइन र ? माओवादीको एजेन्डा र शैली पछ्याउन खोजेरमात्र क्रन्तिकारी छवि निर्माण हुन्छ र ? ‘पहाडियाले मधेस छिरेर बर्बाद गरे’ भन्नुको अर्थ के हो ? मधेसको बर्बादी पहाडियाले गरेका हुन् भने उहाँले चाहिँ काठमाडौं पहाड -मन्त्रीज्यूकै परिभाषामा) मा बसोबास गरेर सदनमा भारतीय पहिचानको भाषा -मैथिली, भोजपुरी आदि) भेष लगातार पेश गरिरहनुचाहिँ कुन हदसम्मको काम हो ? मन्त्रीज्यू, मधेसी…मधेसीको रट लगाइरहनुभएको थियो । उहाँलाई केही प्रश्न- तराईमा सिंह, यादव, झा, मिश्र, त्रिपाठी, ठाकुर, पासवान आदिको मात्र बसोबास छ ? यी मुख्यतया पूर्वी तराईका वासिन्दा हुन् । मधेस भन्नाले तराईको कुन भूभाग हो ? सम्पूर्ण तराई मधेस हो भने पश्चिम तराईमा त उहाँको भाषाका पहाडिया पनि मूल वासिन्दाका रूपमा छन् नि त । त्यस अर्थमा पश्चिम तराईका मधेसी को हुन् ? पश्चिम तराईमा बस्ने पनि मधेसी नै हुन् भने पहाडियाचाहिँ को हुन् ?
राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपालमा जसले जे फलाके पनि हुन्छ ? काठमाडौंका भित्तामा हिजोआज ‘गर्वले भनौं, हामी मधेसी हौं भनेर…’
विदेशिने लोभी होइन, माटोलाई माया गर्ने वर्ग हौं भनेर’ -नेपाली रूपान्तरण) भन्ने नारा पढ्न पाइन्छ । विदेशीने वर्ग भन्नाले को हो ? वैदेशिक रोजगारमा मधेसी जाँदैनन् भन्न खोजिएको हो ?
मन्त्रीज्यूले मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको उदाहरण दिने क्रममा चमार जातिले कहिले पाउँछन् नागरिकता भन्ने प्रश्न तेस्र्याउनुभएको थियो । चमार जातिविषेशलाई मधेसी मन्त्रीले अति पिछडिएका वर्गका रूपमा चित्रित गर्न खोज्नुभएको भए मलाई बताइदिनुहोस्- तपाईंको नागरिकता अभियानले तिनीहरूको तुरुन्तै भोक मेटिन्छ ? तपाईं अहिले आपूर्तिमन्त्री, चमार लगायत तराईका अति पिछडिएका वर्गलाई छाक टार्न खाद्यान्नको कुनै विषेश व्यवस्था मिलाउनुभएको छ ? कि मधेसी जाति जनजातिलाई नागरिकता अभियानले मात्रै पेट भर्न पुग्छ ?
यहाँ चमारले मात्र होइन, अरू भूभागमा -म तपाईंजस्तो पहाडिया…पहाडिया भन्दिन) बस्ने कति चेपाङ, राउटे, लेप्चा आदिले नागरिकता पाएका छन् त ? के पहाडमा बस्ने कुनै वर्गले नागरिकता नपाएकोलाई पनि घोर पक्षपात भन्ने ? मन्त्रीज्यू, वास्तविक अर्थमा यो हरेक जातिको राज्यमा पहुँच अनि त्यसको व्यवस्थापनको सवाल हो । तपाईंलाई गाउँ-गाउँ गएर नागरिकता अभियान चलाउन कसले रोकेको छ ?
अन्त्यमा, मधेसका मुद्दा उठाउनु आजको आवश्यकता हो । तराई मूलका समस्त सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दाको विश्लेषण अनि रचनात्मक समाधानमा बढी तल्लिन हुनु सबैको हितमा छ । लोकतन्त्र आइसकेको छ, अब विगतमा पाइएका पीडाको विश्लेषण गरेर अरू जातिलाई गालीगलौज्ा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो, इवी साध्ने होइन । र आज समुन्नत समाजका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।
Case Study – Tale of two towns in the tarai	TowardsaDemocratic Nepal: Inclusive Institutions foraMulticultural Society